Gaghị enwe ike ịgbanwe eriri LG Watch Sport n'ihi na ha jupụtara na antennas | Gam akporosis
Gaghị enwe ike ịgbanwe eriri LG Watch Sport n'ihi na ha jupụtara na antenna
Egwuregwu LG Watch (na foto dị n'elu, ihe nlereanya dị n'aka nri), yana LG Watch Style, bụ nzọ ọhụrụ na atụmatụ Google na LG maka imepụta ngwaọrụ. Sportdị egwuregwu bụ otu n'ime ihe ndị kasị zuru ezu gam akporo Wear ngwaọrụ anaghị ahapụ ahapụ; Ọ nwere njikọ LTE, GPS, NFC, ihe mmetụta ụda obi, barometer, Wi-Fi na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ Otú ọ dị, ọ na-enweghị ihe nwere ike bụrụ isi ihe dị mkpa: enweghị ike dochie eriri ya..
N'ezie, LG Watch Sport zuru ezu (ma dị oke ọnụ) anaghị enye onye ọrụ ohere na enwere ike dochie eriri ya site na nke ọzọ ọ masịrị ya nke ọma yana na ọ nwere ike ịchọta n'ahịa na ọnụahịa dị mma. Dika o juru ya anya eriri eriri ndị a na-esonye na elekere elekere site na iji kposara ole na ole. Mana ihe dị ka ọ dị ịtụnanya, ọ bụghị n'eziokwu, ebe ọ bụ na LG Watch Sport strap nwere ọrụ karịrị isi na isi nke ịkwanye ya na nkwojiaka onye ọrụ.
1 LG Watch Sport eriri bụ isiokwu nke nkatọ
1.1 Otu eriri na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe
LG Watch Sport eriri bụ isiokwu nke nkatọ
Ternyaahụ, n'ikpeazụ, Google kpughere ọgbọ ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ya maka ngwaọrụ wearable, 2.0 Weebụ Weebụ, na ntinye ohuru ya nye ụdị ngwaọrụ a, LG Watch Style, nke nwere ọdịdị mara mma na ọrụ ndị ọzọ nwere oke, na LG Watch Sport, ọtụtụ zuru ezu ma na-eguzogide ọgwụ.
Nyocha na mmetụta mbụ amalitela ịgbasa na ntanetị na, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha dabara na ọnụahịa dị elu nke ngwaọrụ abụọ ahụ, yana ụdị egwuregwu ahụ bụ otu n'ime ngwa gam akporo Wear zuru oke nke ebidoro rụọ ọrụ, otu akụkụ dọtara uche nke ukwuu: a na-edozi eriri ya na ikpe ahụ site na kposara ihe na, n'eziokwu, abụghị ihe ọhụrụ, dịka ọ na-eme na LG Watch Urbane mbipụta 2nd.
Na ụkpụrụ, oke a na-eme ka o sie ike, ọ bụ ezie na ọ gaghị eme ka ọ ghara ikwe omume, maka onye ọrụ ọ bụla ịgbanwe eriri LG Watch Sport na ọchọrọ, na-ahọrọ agba dị iche iche, akụrụngwa, ụdị na ọnụahịa. Na ụkpụrụ, n'ihi na eziokwu bụ na Ọ bụrụ n ’ị na-eche maka iwere ihe ma ị gbanwee eriri, ị nwere ike ichefu banyere ya.
Ihe kpatara na LG Watch Sport straps enweghị ike dochie anya dị mfe: n'ime, eriri eriri antennas niile maka smartwatch. Njikọ LTE, GPS, njikọ Wi-Fi, na njikọta Bluetooth, ha niile dabere na antenna ndị a na-echekwa nke ọma n'ime eriri elekere.
Yabụ, ihe gbasara nke puru iche anyị ga - ahụ eriri sitere n'aka ndị nrụpụta nke atọ (ọbụnakwa ndị LG na ụlọ ọrụ Google bidoro n'onwe ha) maka LG Watch Sport, na - ebelata nke ukwuu. Ma ọ bụrụ na ha apụta, n’ezie ha agaghị adị ọnụ ala.
Otu eriri na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe
Ọ bụghị naanị nkatọ na-agbasa na Google smartwatches ọhụrụ, ma ọ bụ na ọ bụ naanị ya metụtara eriri ha. Ndị tinyeburu ya n’aka ha na-ekwu nke ahụ akụkụ nke eriri nke kacha nso na ngwaọrụ ngwaọrụ ahụ siri ike (n'usoro, n'ụzọ ezi uche dị na ya, na antenna ndị echekwara n'ime ya enweghị ike gbagọọ). Nkwesi ike a nwere ike ime ka LG Watch Sport ghara inwe ahụ iru ala, ọkachasị maka ndị nwere nkwojiaka sara mbara, ebe eriri, n'akụkụ a, anaghị adaba na onye ọrụ.
Obi abụọ adịghị ya, dị ka ha na-arụtụ aka na ndị uwe ojii gam akporo, "ọ bụ mkpebi injinia na-atọ ụtọ." Dabere na Google, nke a bụ naanị ụzọ iji mee ka ihe niile kwekọọ mgbe elekere ahụ dị ntakịrị.
Ihe si na ihe a niile pụta bụ na, ọ bụrụ na LG Watch Sport eriri ga-emebi, mmezi ahụ ga-adị oke ọnụ karịa na ngwaọrụ ọ bụla yiri ya, nke ga-ezu iji gbanwee eriri; n’agaghị echefu nke ahụ eyi na mmebi nwere ike imetụta ọrụ elekere ahụ n'onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Gaghị enwe ike ịgbanwe eriri LG Watch Sport n'ihi na ha jupụtara na antenna
Gam akporo Wear 2.0 na-ezubere iche smartwatches ndị a maka izu ole na ole sochirinụ